Vaovao - Hampahafantarina ny kinova vaovao momba ny fepetra fampiharana amin'ny fanoloana fahaiza-manao amin'ny indostrian'ny vy sy vy
Hampidirina ny kinova vaovao momba ny fepetra fampiharana amin'ny fanoloana fahaiza-manao amin'ny indostrian'ny vy sy vy
Ny reporter an'ny "Economic Information Daily" dia nahalala fa ny kinova vaovao amin'ny "Fepetra fampiharana amin'ny fanoloana ny fahaiza-manao amin'ny indostrian'ny vy sy vy" dia nahavita ny dingana nangatahana hevitra sy fanitsiana, ary manaraka ny dingana farany. Midika izany fa naato ny asa fanoloana vy amin'ny fireneko sy ny asa fametrahana ny tetikasa mandritra ny herintaona sy tapany hatramin'ny nanombohan'ny taona 2020 dia hanomboka indray ny fanoloana ny famokarana vy.
Nilaza ny olona manam-pahefana iray fa misy ny fifanoherana lalina eo amin'ny sehatry ny vy dia mbola tsy voavaha ifotony. Ny fanoloana fahaiza-manao dia fomba iray lehibe hanatratrarana ny fitambaran'ny fambolena fandrarana ny fahafaha-manao vaovao sy ny fanitsiana ny rafitra. Izy io dia hanampy ny fireneko hampihatra “de-capacité” vaovao, hitarika ireo orinasam-panjakako vy hanatsara ny fanaparitahana fahaiza-manao ary hanitsy ny firafitry ny faritra.
Wen Gang, talen'ny lefitry ny Diviziona vy sy vy ao amin'ny Departemantan'ny fitaovam-piasan'ny Minisiteran'ny Indostria sy ny haitao fampahalalam-baovao, dia nilaza tamin'ny Forum momba ny fampandrosoana vy sy vy any Beibu voalohany tamin'ny 2021 fa na dia mampientanentana aza ny fivoaran'ny indostrian'ny vy ankehitriny , tsy maintsy marihina koa fa ny indostrian'ny vy dia manana fivoahana lehibe amin'ny fahaiza-manao sy ny vokatra famokarana, ary ny fototra iorenan'ny fahaiza-manao dia tsy mafy orina. , Ny habetsaky ny fanafarana vy dia lehibe loatra, sns, ary atahorana ny filaminan'ny indostria. Mandritra izany fotoana izany dia mbola misy ny fifanoheran-kevitra lalina sy ny olana toy ny banga eo amin'ny fampandrosoana ny orinasa sy ny fitakiana fampandrosoana avo lenta, ka tsy afaka hanana fanantenana be an-jambany isika.
Ny politika vaovao misolo ny fahaizan'ny famokarana vy dia mikendry ny hanara-maso tsara ny tsipika mena tsy hampiditra fahaiza-mamokatra vaovao. Nilaza i Wen Gang fa ho hentitra kokoa ny tahan'ny fanoloana vy amin'ny famokarana vy. Ny fepetra fampiharana ny fahaiza-manao famerenana nohavaozina dia hampiakatra be ny tahan'ny fanoloana, hanitatra ireo faritra saro-pady ary hampitombo hatrany ny famerana ny haben'ny fanarenana sy ny fanitarana ireo faritra manokana. Saingy mandritra izany fotoana izany, mba hampirisihana ireo orinasa hampiroborobo ny fampivondronana sy ny fandaminana indray, ny fandrosoana milamina, ny fanaovana vy misy lafaoro elektrika, ary ny fikarohana ny fivoaran'ny teknolojia ambany-karbaona, ny fepetra fampiharana dia nampidina araka ny tokony ho izy ny tahan'ny fanoloana, hita taratra ireo politikam-panohanana samihafa.
"Ny fampitomboana ny tahan'ny fanoloana fahaiza-manao dia ny fampihenana ny fampandrosoana ny aoriana. Ny fametrahana ny tahan'ny fanoloana fahaiza-manao dia tsy maintsy miantoka fa aorian'ny fampiharana ny tetikasa dia azo fehezina tsara ny fahafahan'ny famokarana ary tsy misy fihenan'ny fahaiza-manao sy ny fiakaran'ny vokatra. " Hoy ny avy ao anatiny.
Nilaza ilay voakasik'izany fa miaraka amin'ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny fangatahana-fangatahana amin'ny indostrian'ny vy, nihena ny vidin'ny vy, ary nihatsara ny tombom-barotra avy amin'ny orinasa. Amin'ny toerana sasany, manintona an-jambany ny fampiasam-bola ary tsy miraharaha ireo fepetra ireo, ny antony manosika ny handefa haingana ireo tetikasa fandoroana vy. Ny fomba fitantanana ny tetik'asa dia mamaritra fa misy ny tsy fahazoan-kevitra amin'ny "fidinana voalohany amin'ny fiaran-dalamby ary avy eo mividy tapakila", ary mamela ny indostrian'ny vy mety hampidi-doza amin'ny fihoaram-pefy amin'ny lafiny iray.
Noho io antony io dia mazava ny fepetra fampiharana ary voarara tanteraka ny fampitomboana ny fahafaha-mamokatra vy amin'ny faritra lehibe hisorohana sy hifehezana ny fahalotoan'ny rivotra. Ireo faritany (faritra mizaka tena, tanàna) tsy nahavita ny tanjon'ny fanaraha-maso ny famokarana vy dia tsy hanaiky ny fahafahan'ny famokarana vy nafindra avy any amin'ny faritra hafa. Ny faritra Yangtze River Economic Belt dia mandrara ny tetikasa fandotoana vy vaovao na nitarina ivelan'ny faritra fanarahan-dalàna.
Mandritra izany fotoana izany dia nanipika i Wen Gang fa amin'ity taona ity dia hiara-hiasa amin'ny komisiona misahana ny fampandrosoana sy ny fanavaozana ary ny sampan-draharaha hafa mifandraika amin'izany handaminana ny “fiherenana” ny fihenan'ny vy sy ny fihenan'ny vokatra vy tsy miangatra, ary hitarika ireo orinasa vy handao ny fomba fampandrosoana lehibe handresena amin'ny fatra, ary hanamafisana tsara ny fahombiazan'ny fihenan'ny fahaiza-manao. .
Talohan'io, ny Vaomieram-pirenena ho an'ny fampandrosoana sy ny fanavaozana ary ny minisiteran'ny Indostria sy ny haitao fampahalalana dia nanao fandaharana mba "hijerena ny fiverenana" amin'ny fihenan'ny herin'ny vy amin'ny 2021 sy ny fihenan'ny vokatra vita amin'ny vy. Ny minisitera sy ny vaomiera roa dia hifantoka amin'ny fanaraha-maso ny fanidiana sy ny fisintomana ireo fitaovana fandoroana vy manelanelana amin'ny famahana ny fahaizan'ny famokarana vy be loatra ary ny famongorana ny "vy eo an-toerana". Mandritra izany fotoana izany, ny fandinihana ankapobeny ny fiakaran-karbaona, ny tsy fanjarian-tsoratry ny karbaona ary ny teboka kendrena maharitra, mifantoka amin'ny fampihenana ny vokatra vy avy amin'ireo orinasa tsy mahomby amin'ny tontolo iainana, ny fanjifana angovo avo lenta ary ny haavon'ny fitaovana teknolojia somary mihemotra rehetra ”, ary miantoka ny fanatanterahana ny vy eto amin'ny firenena amin'ny 2021. Nihena isan-taona ny vokatra.
Zhang Longqiang, filohan'ny Ivon-toeram-pikarohana momba ny fenitra momba ny fampahalalana momba ny indostria metallurgical, dia nilaza fa ho an'ny faritra dia ilaina ny fampiharana amin'ny fomba henjana ny fepetra fanoloana fahaiza-manao, fampitomboana ny tahan'ny fanoloana fanodinam-potoana lava, fampiharana mafy ny lalàna mandrara ny fahafahan'ny famokarana vy vaovao, ary manadihady fatratra. ary miatrika ny fanitsakitsahana ny lalàna sy ny lalàna. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ara-tsiantifika ny fizarana hery mamokatra, ny fisehoan'ny "Fitaterana vy-atsimo atsimo" dia hovaina amin'ny fomba mahomby. Nanolo-kevitra izy fa any amin'ny faritra Beijing-Tianjin-Hebei, tokony hahena ny fahaizan'ny famokarana vy lava; mifantoka amin'ny Beijing-Tianjin-Hebei sy ny faritra manodidina, ny Yangtze River Delta, ary ireo faritra hafa manana fahaiza-manao famokarana maharitra sy ny tontolo iainana ekolojika manan-danja, ary ny firindrana sy ny fampivoarana ny fanamboarana vy fohy.
Luo Tiejun, filoha lefitra an'ny China Iron and Steel Association, dia nanipika fa ny fitomboana mitohy amin'ny famokarana vy any amin'ny fireneko entin'ny fangatahana dia nanohana tsara ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena. Na eo aza izany, amin'ny fotoana maharitra, miaraka amin'ny fanovana ny firoboroboan'ny firoboroboan'ny fireneko, ny fanjifana vy tsy ara-dalàna "tamin'ny taon-dasa ary ny vanim-potoana ankehitriny dia sarotra tohina.
Luo Tiejun dia nanolo-kevitra fa ny fetran'ny famokarana dia tsy maintsy tazonina amin'ny tsindry, ary tsy misy "iray habe mifanaraka amin'ny rehetra". Tokony hifantoka amin'ny famerana ny fivoahan'ny fanampim-panazavana vaovao tsy ara-dalàna sy ny tetik'asa fanoloana tsy fenitra nanomboka ny taona 2016 isika; mametra ny vokatra azo avy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny orinasa tsy manara-penitra; mametra ny fivoahan'ny vy kisoa mba hamerana ny fivoahan'ny vy tsy miangatra. Ho an'ireo orinasa mahatratra ny famokarana vy avo lenta avo lenta sy lafaoro misy herinaratra, tokony hisy ferana na tsy misy famerana, saingy nilaza ihany koa izy fa ilay antsoina hoe tsy voafetra dia tsy famokarana entana feno, ary ny fivoahan'ny ireo orinasa ireo dia tsy tokony hampiakatra isan-taona ihany koa.